Inkabadan 70 saxafi oo lagu qasbay in ay ka baxsadaan dalalkooda sanadkii la soo dhaafay – SBC
Inkabadan 70 saxafi oo lagu qasbay in ay ka baxsadaan dalalkooda sanadkii la soo dhaafay
New York:- Warbixin uu ka soo saaray magaalada New York guddiga caalamiga ilaalinta suxufiyiinta ayaa lagu sheegay in inkabadan 70 saxafi lagu qasbay in ay ka tahriibaan dalalkooda sanadii la soo dhaafay kuwaasi oo kala bar ay ka carareen dalalka Cuba iyo Iran oo lagu tiriyo in ay yihiin dalalka sida aadka ah u caburiya saxaafadda.
Warbixinta ayaa tilmaamtay in dowladda Iran ay cadaadis xoogan saartay warbaahinta madaxa banaan labadii sano ee la soo dhaafay halka dowladda Cuba ay xoriyadoodii dib u siisay weriyaal ay horey u xirtay si ay uga baxaan dalka.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in dowladda Iran ay ku qasabtay 18 saxafi in ay ka cararaan dalka halka dowladda Cuba ay dalka ka musaafirisay ku dhowaad 20 saxafi sida warbixinta lagu sheegay.
Guddiga ayaa tilmaamay in dalalka Ethiopia, Somalia, Ciraaq iyo Zimbabwe ay mas’uul ka yihiin kala bar dhacdooyinkaas.
Dhanka kale warbixinta ayaa tilmaamay in dalalka kale ee Latin America ay xaaladda weriyayaasha ay ka soo reenayso marka laga reebo dalka Mexico oo ku qasbay hal weriye oo keliya in uu dalka isaga cararo.
Warbixinta ayaa tilmaamtay in xabsiga ama handadaada ay yihiin waxa keliya ee saxafiyiinta ku qasbay　in ay dalalkooda ka cararaan inta u dhexeysay June 2010 iyo May 2011, taasi oo ka dhigaysa tirada saxafiyiinta ka cararay dalalkooda sanadkii la soo dhaafay 70 saxafi marka la barbar dhigo sanadkii hore ay tiradu ay gaartay 85 saxafi.
Tan iyo sanaddii 2001, xilligaas oo uu bilaabay guddiga ilaalinta saxafiyiinta soo saaritaanka warbixin dhameystiran oo ku aadan mowduucan, ayaa waxaa la xusay in 649 saxafi in dalkooda ka baxsadeen.
Sidoo kale warbixinta ayaa lagu sheegay in 22% saxafiyiinta ka carartay dalalkooda ay ka shaqeeyaan warbaahin , halka kuwa kale ay soo waajahday caqabado dhanka sharciga iyo kala duwanaanshaha afafka ah taasi oo　waxyeeleesay mihnadooda saxaafadeed.
Warbixinta ayaanan lagu soo hadal qaadin xaaladaha saxfiyiinta ka baxa dalalkooda kadib markii ay helaan balan qaadyo dibadda ah iyo kuwa ka cararaya dalalkooda sababo la xiriira dagaalada ka socda awgeed.